Yakaparadzanisa Oversized 2GB OST Faira muSmall PST Mafaira - Nhanho-nhanho Nongedzo
musha Products DataNumen Exchange Recovery Yakaparadzanisa Oversized 2GB OST Faira mune Diki PST Mafaira
kushandisa DataNumen Exchange Recovery Kupatsanura Oversized 2GB OST Faira mune Diki PST Mafaira
Ongorora: Kana iwe uine Outlook 2003 kana yepamusoro vhezheni yakaiswa, tinokukurudzira kuti ushandise nzira iyi kudzoreredza yako yakawandisa OST faira panzvimbo. Zvikasadaro, ndapota shandisa nzira iri mugwara iri.
kana wako OST iyo faira inogadzirwa neMicrosoft Outlook 2002 kana yakaderera vhezheni, uye saizi yayo inosvika kana kupfuura 2GB, uchasangana ne zvakawedzera OST dambudziko refaira uye haigone kushandisa iyo OST faira chero zvimwe. Mumamiriro ezvinhu akadaro, unogona kushandisa DataNumen Exchange Recovery kupatsanura yakawandisa OST faira mune akati wandei madiki maPST mafaera ari pasi pe2GB uye anoenderana neAptlook 2002 uye akaderera shanduro. Ipapo iwe unogona kushandisa Outlook 2002 kana yakaderera vhezheni kuvhura iyo yakakamurwa PST mafaera rimwe nerimwe uye nekuwana yavo data pasina matambudziko.
Cherechedza: Usati wapatsanura yakanyanya kuwanda OST faira ne DataNumen Exchange Recovery, ndapota vhara Microsoft Outlook uye chero chimwe chirongwa chinogona kuwana kana kugadzirisa iyo OST ikwidzwe.
uye gadza saizi muganho kune kukosha kuri pasi pe2GB. Zvinokurudzirwa kushandisa kukosha icho chinongova chidimbu che2GB kuitira kuti PST yako faira isasvike 2GB zvakare munguva pfupi, semuenzaniso, 1000MB. Ndokumbira utarise kuti iyo unit ndeye MB.
Sarudza yakawandisa OST faira rinofanira kutsemurwa:
Unogona kuisa yakanyanya kuwanda OST faira zita zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo OST faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane yakanyanya kuwanda OST faira kuti riparadzaniswe pakombuta yemuno.
Nekutadza, riini DataNumen Exchange Recovery inotarisa uye inotsemura sosi yakawandisa OST faira mune akati wandei madiki maPST mafaera, yekutanga yakakamurwa PST faira inonzi xxxx_fixed.pst, yechipiri inonzi xxxx_fixed_1.pst, yechitatu inonzi xxxx_fixed_2.pst, zvichingodaro, apo xxxx ndiro zita renyanzvi yakanyanya kuwanda. OST faira. Semuenzaniso, kune sosi yakawandisa OST faira Chinyorwa.ost, nekukasira, yekutanga yakakamurwa PST faira ichave Source_fixed.pst, uye yechipiri ichave Source_fixed_1.pst, uye yechitatu ichave Source_fixed_2.pst, nezvimwe.
Iwe unogona kuisa izvo zvinobuda PST faira zita zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo PST faira zita.
Sezvo isu tichingova neAptlook 2002 kana yakaderera vhezheni yakaiswa, isu tinofanirwa kuseta fomati yeinoburitsa PST faira ku "Outlook 97-2002" mune combo parutivi rwekuburitsa faira hodhi bhokisi. Kana iwe ukaisa fomati ku "Auto Kutsunga", ipapo DataNumen Exchange Recovery ichagadzira iyo PST faira inoenderana neAptlook yakaiswa pakomputa yemuno.
Baya bhatani, uye DataNumen Exchange Recovery kuda start kuongorora iyo sosi yakawandisa OST faira, kudzoreredza uye kuunganidza iyo data irimo, uyezve wovaisa mune nyowani yakakamurwa PST faira rine zita rakaiswa muDanho 5. Tichashandisa Source_fixed.pst semuenzaniso.
Kana saizi yeSource_fixed.pst yasvika pamuganhu preset muDanho rechipiri, DataNumen Exchange Recovery ichagadzira yechipiri PST faira inonzi Source_fixed_1.pst, uye edza kuisa iyo data yasara mune iyo faira.
Kana iyo yechipiri faira yasvika pamuganhu wakatemerwa zvakare, DataNumen Exchange Recovery ichagadzira yechitatu PST faira inonzi Source_fixed_2.pst kugadzirisa iyo data yasara, zvichingodaro.
Mushure mekuparadzaniswa maitiro, kana paine chero data rakatamisirwa kune rakakamurwa mafaera ePST zvakabudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji seizvi:
Iye zvino unogona kuvhura mafaira akaparadzaniswa ePST rimwe nerimwe ne Microsoft Outlook 2002 kana shanduro dzakaderera. Uye iwe unozowana rese data reiyo yepakutanga kuwanda OST faira rakapararira pakati peaya akapatsanurwa mafaera ePST.
Cherechedza: Iyo demo vhezheni icharatidza inotevera meseji bhokisi kuratidza kubudirira kweiyo nzira yekuparadzanisa:
Ipapo iwe unokwanisa kuvhura akapatsanurwa mafaera ePST neMicrosoft Outlook 2002 kana akaderera shanduro. Nekudaro, kune yega yega meseji uye chinongedzo mumafaira ePST akapatsanurwa, zvirimo zvichatsiviwa nerinotevera demo ruzivo:
Kuti uwane zvirimo zvirimo, ndapota Raira iro rakazara vhezheni.
Yakaparadzanisa Oversized 2GB OST Faira mune Diki PST Mafaira